Qunfeng Intelligent Machinery Co., Ltd. akanga achitaurwa nevanopinda 1995 uye vakazvipira pakutsvakurudza kukura, gadzira, kuparadzirwa uye basa rokuvaka zvinhu michina yakadai chesamende chinogumbura rokuita mutsetse, AAC nechigumbuso dzaFord uye kuvakwa tsvina kurapwa muchini. With makore anopfuura 20 dzamarudzi kutozoedza kuwana vakwane kukura uye kugadzirwa, kambani yedu rinopa yose kuvakwa indasitiri pamwe nzvimbo hwaro avangaite makirisito makwikwi ne zvakakwana combing dzidziso "akangwara michina" nedzidziso yokuti "mukuru kunyatsoshanda uye zvakatipoteredza noushamwari ".
Tinogara kutora kukurudzira guta kukura pamwe akangwara rwokugadzira. Sezvo hwatine repsonsibility / Our hwokugadzira R & D taskforce ine nyanzvi muminda anenge 100 zvakadai zvemaziso, hydraulic yemagetsi uye kuvaka zvinhu. We chamakamisa maviri tsvakurudzo masangano uye akasimbisa yakanaka inokosha tikabatana navazhinji mukurumbira Chinese mumayunivhesiti uye tsvakurudzo masangano. Hatina kushingaira muchirongwa drafting uye rectification anodarika gumi nevaviri National uye maindasitiri zvaanoda zvigadzirwa. Hatina dzakakundwa anopfuura 200 patents kuti kuvamba, utility uye magadzirirwo uyewo nhatu dzematunhu hwokugadzira kubudirira appraisals.
Kudyidzana manfacturing System
With akasanganiswa mubhizimisi pamusoro rmb mamiriyoni 45, Qunfeng chigaro 'Fujian Qunfeng Machinery Co., Ltd.' uye 'Qunfeng Industrial Park' muna Nan'an Binjiang midziyo kugadzira chawo muna 2008, iyo yakatanga hachizi itsva akangwara panguva. The maindasitiri paka anopindura vanosvika 215,000 mativi metres pamwe zvinonyatsorehwa pauriri nzvimbo mari kuti 145,000 mativi mamita. Vachitora mukana wayo simba zvemari simba, Qunfeng akaita vakasuma marudzi akasiyana zvezvipfuwo uye mhiri kwemakungwa yemhando kubudiswa midziyo kusanganisira CNC kubudiswa centre, Welding robhoti, zvakazara-zvoga kupisa kurapwa zvokushandisa, Laser nokuveza muchina uye CNC yeplasma murazvo okukohwa muchina. With kugara utsanzi, pamwe pamusoro dzomunyika bhizimisi, uye kudyidzana pakati pose yepamusoro pfuma, Qunfeng rava akangwara, zviripo uye eco ushamwari piyona mumunda China chivakwa zvinhu muchini munda wayo wakanaka uye yemhando chigadzirwa design, simba uye chigadzirwa unhu simba uyewo akazvipira uye vepachokwadi basa.
Global basa ezvinhu
Sezvo muenzaniso zvebhizimisi kuti China chivakwa zvinhu michini, Qunfeng anotipa upscale uye yepamusoro michini pamwe akangwara michina nokuda makasitoma avo. Kuvanza kumakondinendi matanhatu ne 7 mhiri kwemakungwa basa dzemapurisa uye 24 mudzimba mahofisi, Qunfeng ashumira 8000 nemakasitoma okunyika 110 uye kumatunhu pamwe yakawanda mukugadzira michina akangwara. Qunfeng chakabereka mukurumbira mukuru munyika pamwe zvinhu yakanga aivigirwa kumusika mukuru-pamwero munyika, zvinosanganisira Asia, Europe, South America, Oceania, Africa uye North America.
Chinokudza uye Awards
Munguva kwesainzi kupfuura 20 gore uye kuumba mberi, Qunfeng nguva dzose anochengeta pfungwa yakasimba evanhu basa uye vakagamuchira yakakwirira kurumbidzwa uye kutsigirwa hurumende uye nzanga ayo mweya "Kuvimbika, Innovation, kushanda zvakanaka uye Cooperation". Qunfeng akaita vakagamuchirwa mhando dzakasiyana-siyana certifications kusanganisira yepamusoro utariri hurongwa, Environmental Management hurongwa, OHSMS, IPMS, kuchengeteka kugadzirwa Standardization zvakanaka uye omunyika zvombo uye midziyo unhu zvakanaka. Qunfeng akunda yakawanda mibayiro, akadai "National tochi Program Key High hwemberi mukugadzira Enterprise", "National Intellectual Property Pilot Unit", "Provincial Excellent uye Innovative Enterprise", "Engineering Technology Research Centre Provincial Concrete Building Materials Achigadzira Enterprises", "Provincial Famous vanozivikanwa", "Provincial Famous Brand Products", "Provincial anonyatsozivikanwa Enterprise", "Provincial International Famous Brand", "Provincial Customers-kugutsikana Product" uye "kwemaindasitiri uye Informatization Integrated Model Enterprise".
With chinokudza uye netarisiro, Qunfeng acharamba vanoomerera pamusoro makirisito kukosha rakasikwa ramangwana Intelligence uye Innovation, uye kuita basa guru rokuvaka guta zvipenyu noungwaru uye kuveza vanhu kwezvakatipoteredza-ushamwari yemazuva ano.